ကွန်ဂိုနိုင်ငံက အီတလီသံအမတ်အသတ်ခံရမှုတွင် လူသတ်သမားဟုသံသယရှိသူများကို ဖမ်းဆီး - Xinhua News Agency
ဂိုမာ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (DRC) ဆိုင်ရာ အီတလီသံအမတ်ဟောင်းဖြစ်သူ Luca Attanasio သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိသူအများအပြားကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (DRC) ၏ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ North Kivu ပြည်နယ်၊ Goma-Rutshuru သို့သွားသည့်လမ်းပေါ်၌ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP)ဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမစ်ရှင်အား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အီတလီ သံအမတ်ယာဉ်တန်းအား လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်သူများက ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၎င်းသံအမတ်မှာ ဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကွန်ဂိုအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့၏ပြည်နယ်ကော်မရှင်နာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Aba van Ang က North Kivu ပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဂိုမာမြို့ရှိ သတင်းစာဆရာများရှေ့တွင် သံသယရှိသူအများအပြားကို ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ဆိုးသည် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ပြန်ပေးဆွဲရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်း Aba van Ang ကဆိုသည်။ သံသယရှိသူများသည် သံအမတ်ကို ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် “သံအမတ်ကြီး၏ကိစ္စတွင် ဒေါ်လာတစ်သန်းဆုံးရှုံးသွားသည့်အတွက် အလွန်နောင်တရခဲ့ကြကြောင်း၊ ဒီကိစ္စအပေါ်အငြင်းပွားခဲ့ကြကာ အချင်းချင်း ခွဲထွက်ကြဖို့ပင် ဆန္ဒရှိခဲ့ကြကြောင်း၊၎င်းတို့က အလွန်ကြီးမားသည့် ရာဇဝတ်သားများဖြစ်ကြောင်း’ ပြောကြားခဲ့သည်။
North Kivu ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး Ndima Kongba Constant က သံသယရှိသူများအား တရားစီရင်မှုပြုလုပ်ပေးရန် တရားရေးအာဏာပိုင်များအားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ “ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တရားစီရင်မှုကိုတောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့တရားစီရင်မှုကနေ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့သမျှအတွက် သူတို့အပြစ်ပေးခံရတော့မှာဖြစ်တယ်’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သံအမတ်ကြီး၏သက်တော်စောင့်၊ ယာဉ်မောင်းနှင့် အခြားအမြောက်အမြား တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသအာဏာပိုင်များထံမှ သိရသည်။ ယာဉ်တန်း၏ အခြားအဖွဲ့ဝင် အများအပြားသည်လည်း သေနတ်ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုသည် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်များအား ယာဉ်တန်းမှ ပြန်ပေးဆွဲရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်အရ သိရသည်။North Kivu နှင့် Ituri ပြည်နယ်များသည် လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ ၆ ရက်ကတည်းက ပိတ်ဆို့ဝန်းရံခြင်း ခံထားရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
GOMA , Jan. 18 (Xinhua) — Several suspects accused over the death of Luca Attanasio, former Italian ambassador to the Democratic Republic of the Congo (DRC), were arrested, local authorities said Tuesday.
In February 2021, the Italian diplomat succumbed to his woundsafew minutes after his convoy was ambushed by armed attackers on the road to Goma-Rutshuru, in DRC’s northeastern province of North Kivu where he was onahumanitarian mission with the World Food Programme (WFP).
General Aba van Ang, provincial head commissioner of the Congolese National Police, made the announcement atapress briefing, in which several suspects were presented to the provincial authorities in front of the press in Goma, capital of North Kivu.
The tragedy was likely to beabotched ransom attempt, according to Aba van Ang. After shooting the ambassador, the suspects “very much regretted having lostamillion dollars in the ambassador’s case. They disputed over this issue and even wanted to separate. That’s it, they are big criminals.”
The governor of North Kivu, Lieutenant General Ndima Kongba Constant, called on judicial authorities to bring the suspects to justice. “In any case, I appeal to our justice, even today that justice is done and that they are punished in relation to everything they have caused in our people,” he said.
According to local officials, in February 2021, the ambassador’s bodyguard, the driver and several others were also killed in the attack. Several other members of the convoy were seriously injured by gunshot wounds. The attack was part of an attempt to kidnap UN personnel from the convoy, according to the same source. The provinces of North Kivu and Ituri have been under siege since May 6, 2021 due to violence committed by armed groups. Enditem